Igbo, John: Lesson 104 - Jizọs rịọrọ ka e mee ka chọọchị dịrị n'otu (Jọn 17:20-26) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 104 (Jesus intercedes for the church's unity)
20 Ọ bughi nání ndia ka m'nēkpe ekpere, kama ọ bu kwa n'ihi ndi kwere na Mu site n'okwu-ha; 21 ka ha nile we buru otù; dika Gi, Nna, nọ nimem, Mu onwem kwa nime Gi, ka ha onwe-ha we buru otù nime ayi; ka ụwa wee kwere na ị zitere m.
Kraist mere ka ndi neso uzo guzosie ike na ihu Chineke na ike nke Mo, nagwa Nna ya ka o debe ha site na Onye ojo tutu akpogide ya n'obe. Mgbe o kwenyesiri ike na a zara ekpere maka ndị ozi ya na Chọọchị ya, ọ na-atụ anya ọdịnihu ma hụ ka ọtụtụ ndị kwere ekwe si n'ozi ndị ozi ya. Ihe oyiyi nke onye ahụ a kpọgidere n'obe na-emegide Setan na mmehie mere ka ha bata. Site na ntụkwasị obi ha na Kraịst dị ndụ, Mmụọ ahụ ga-agbadata n'obi ha ka ha wee keta oke amara nke ndụ Chineke. Site n'okwukwe ka ha na Nna na Okpara ya n'otu na idi ebighi ebi.
Kraist kpere ekpere maka ndi kwere ekwe ndi kwere na ndi ozi. N'ụzọ dị ịtụnanya, mgbe ọ na-ekpe ekpere, ha achọtabeghị ha. Okwu ya na-egosi na ikwesị ntụkwasị obi nke ozi onyeozi ahụ bụ eziokwu. Ya mere, olee ihe dị mkpa ọ chọrọ n'aka anyị? Ndi enye ama ekpebọn̄ akam ke idem nnyịn? ọganihu anyị, ọganihu anyị n'ọdịnihu? Ee e! Ọ rịọrọ Nna ya ka o nye anyị ịdị umeala n'obi na ịhụnanya, ka anyị wee bụrụ otu na Ndị Kraịst nile nwere ezi obi. Anyị ekwesịghị iche na anyị dị mma karịa ndị ọzọ ma ọ bụ hụ omume ha nke a na-apụghị izere ezere.
Udi nke ndi kwere ekwe bu ebum n'uche nke Kraist, Nzuko nkewa nke megidere ya. Otú ọ dị, ịdị n'otu a nke Kraịst rịọrọ ka a ghara iwulite na ndokwa chọọchị, kama ọ bụ njikọ nke ime mmụọ na ekpere na Mmụọ karịa ihe ọ bụla ọzọ. Dika Chineke zuru oke bu otua, otua ka Kriast riori Nna ya ka o webata ndi nile kwere ekwe n'udo nke Mo Nso, ka madu nile we di na Ya. Ma Kraist adighi ekpe ekpere, "ka ha we buru otu n'ime m ma obu gi", ma "n'ime anyi". Ya mere, o na-egosi na ịdị n'otu zuru okè a dịka Nna na Ọkpara na Mmụọ, bụ ihe nlereanya. Ọ na-achọ ịzụlite gị n'ọkwa ya n'ihi na n'èzí mkpakọrịta Atọ n'Ime Otu enwere ihe ọ bụla ma hel.
Ebumnuche nke ịbụ ndị e guzobere n'ịdị n'otu nke Chineke abụghị iji mee onwe anyị obi ụtọ n'ụzọ ime mmụọ, kama ka anyị bụrụ ndị àmà n'ihu ndị ọzọ bi n'ebe dị anya site na Chineke. Olileanya, ha ga-achọpụta na ha anwụọla n'ime mmehie na ndị ajọ omume na mpako na ndị ohu ha agụụ mmekọahụ, n'ihi ya, ha kwesịrị ichegharị ma chigharịkwuru Onye Nzọpụta. Unu ndị na-arapara n'ahụ Nna ahụ, Ọkpara na Mmụọ Nsọ ga-enweta ume iji dị umeala, ịhụnanya, na nnwere onwe ime mmụọ ịhụ onye ọ bụla kwere na ya n'anya; na-aṅụrị ọṅụ n'ihu ha ma soro ha bụrụ ndị akaebe dị oke ọnụ n'anya Kraịst. Anyị niile bụ ihe akaebe nke chi nke Nwoke ahụ bụ Jizọs. Ọ bụrụ na Ndị Kraịst nile nwere ezi obi, ọ dịghị ndị na-abụghị Ndị Kraịst ga-anọgide na ụwa. Ịhụnanya ha na udo ha ga-adọta mmadụ niile ma gbanwee ha. Ka anyị ṅaa ntị n'ihe Jizọs chọrọ ma dịrị n'otu! Ị bu n'uche ịnọgide na-abụ ihe kpatara ndị mmadụ na ha agaghị ekwere na Kraịst, n'ihi na ị jụrụ ịnọnyere ndị kwere ekwe ma nye aka na nkewa ụka, nke bụ ahụ nke Kraịst?
22 I nyewo ha otuto ahu nke I nyeworom; ka ha wee bụrụ otu, ọbụna dị ka anyị bụ otu; 23 Mu onwem nime ha, gi onwe-gi kwa nimem, ka ewe me ka ha zuo okè n'otù; ka uwa we mara na Gi onwe-gi ziterem, we hu ha n'anya, dika I hurum n'anya.
Gịnị bụ ebube Jizọs? Ọ bụ ìhè ya ma ọ bụ ìhè nke ebube ya? Ee e! Ebube ya zoro n'azụ ịdị umeala n'obi, ndidi na ịdị nwayọọ. Omume nile nke onyinye nke Mo Nso bu ihe nke ebube ya. Ya mere Jọn huru, we b͕a àmà, si, Ayi ahuwo ebube-Ya. Ọ naghị ekwu banyere nnwogha ahụ ma ọ bụ nbilite n'ọnwụ ya naanị ya, kama ọ na-ezo aka na anụ ụlọ nri na cross ya. N'ebe ndị a, otuto nke ịhụnanya Chineke pụtara ìhè ebe Ọkpara ahụ wepụrụ onwe ya ebube dị ebube ma gosipụta ihe kachasị mkpa nke ebube ya n'ụdị mmadụ. Nke a ebube Jizọs nyere anyị. Mmụọ nke Nna na Ọkpara ahụ dakwasịrị anyị.
Ebumnuche nke ọdịiche a nyere anyị abụghị maka igosipụta na mgbasa ozi onwe onye, kama ka anyị nwee ike ido onwe anyị n'okpuru ịdị n'otu maka ije ozi, ma zukọta maka ọrụ ibe anyị na iji sọpụrụ ndị ọzọ. Site na ndu ime mmụọ ndị a, Jizọs rịọrọ Nna ya maka otu ịdị n'otu na mkpakọrịta nke a maara na Atọ n'Ime Otu, iji mee ka anyị mara àgwà ndị a. ihn'anya nke Chineke b iheo ijiji nwalee Nzuko Kraist. Ọ bụ onye na-akpụzi anyị n'ime onyinyo ya ebighi ebi.
N'ezie, Chineke n'ozuzu Ya bi na Chọọchị (Ndị Efesọs 1:23; Ndị Kọlọsi 2:9). Ma obu na i nweghi obi ike ikwuputa okwu ndi na-abia n'otu akwukwo ahu, "nime Kraist, oke nke chi di iche iche no na anu aru, ayi onwe ayi zuru oke nime ya". Ihe akaebe a nke ndịozi bụ ihe àmà na-aza ekpere Jizọs tupu ọnwụ ya. Anyị na-efe ma na-eto Jehova n'ihi na ọ dịghị eleda anyị anya, onye obi ọjọọ na onye ikpe mara dị ka anyị dị, ma o mere ka anyị dị ọcha ma doo anyị nsọ ma sonyeere anyị, ka o wee dịrị ndụ ya site n'aka anyị.
Obi siri Jizọs ike tupu oge eruo na anyị nwere ike ịbụ ndị zuru oke n'ịhụnanya na ịdị umeala n'obi. K'anyị hụ ibe anyị n'anya. Ọ bụghị izu okè na akụnụba, ikike, amamihe, ma na ebere na ịhụnanya na obiọma bụ ihe ọ chọrọ n'ime anyị. Obi ọmịiko na ndidi bụ nzube ya bụ isi mgbe o kwuru, sị, "Zie okè ka Nna gị nke eluigwe zuru okè." Iwu a chịkọtara àgwà ya n'ịhụ ndị iro n'anya. Mana n'ekpere ekpere ya, o bu n'uche ka ihe zuru oke nke izu oke, otu ime mmuo n'ime Choochi na Chineke.
Mmo Nso adighi eduga n'inwe mmeghe maob iche iche, ma náeso ndi nke nso. Udo nke Atọ n'Ime Otu bụ ụkpụrụ anyị, anyị anaghị anọchi anya Chineke n'ụwa ma ọ bụrụ na anyị abụghị otu. Dika ndi obula n'eme ka oyiyi nke Chineke di na agba ochie, otua ka Church na ndi ozo kwesiri igosi onyinyo nke Atọ n'Ime Otu.
Nkwekorita n'ime Chọọchị na-amasị ndị ụwa ka ha hụ na anyị sitere n'aka Chineke. Ha na-amalite ịhụ na Chineke bụ ịhụnanya. Ọ bụghị okwu nkịtị ma ọ bụ nkọwa dị ogologo nke na-eme ka okwukwe dịrị onwe ha. Ọ bụ ọṅụ na mgbakọ nke ụmụ Chineke na-ekwu okwu ike ma dị mma karịa ogologo okwu. Ya mere, Mmụọ Nsọ na-eme ka Chọọchị mbụ ahụ dị na Jerusalem dị n'otu n'ịdị n'otu nke ime mmụọ.
EKPERE: Daalụ, Onyenwe anyị Jisọs, maka ịdu anyị, ndị na-erughị eru, inwe okwukwe na gị. I meela ka anyị bụrụ ndị ohu gị site na àmà nke ịhụnanya gị. Anyị na-efe gị, n'ihi na ị dị ọcha ma kwadebe anyị ịghọ ndị òtù nke ahụ gị. Mee ka anyị nwee ịhụnanya nke Atọ n'Ime Otu. Anyị na-eto ma na-eto gị ma na-arịọ gị ka i nye anyị ike ịbanye n'ime ụka anyị na ịdị n'otu na ịdị n'otu.
Gịnị ka Jizọs rịọrọ n'aka Nna ya maka abamuru anyị?